Akụkọ - Otu esi ahọta uwe kachasị mma n'èzí?
Pụ n'oge oyi, gburugburu dị iche iche, oge dị iche iche, ụzọ dị iche iche, afọ dị iche iche, nhọrọ uwe ndị dị n'èzí dị iche. Yabụ kedu ka ịhọrọ?
1. Mụta ụkpụrụ atọ ndị a
Site n'ime ruo n'èzí, ha bụ: oyi akwa-oyi akwa-okpomọkụ oyi akwa-windproof oyi akwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ajị ajị-ajị ajị agba bụ uwe elu ma ọ bụ t-uwe na-agba ngwa ngwa, akwa oyi akwa bụ ajị anụ, na oyi akwa mkpuchi bụ jaket ma ọ bụ jaket ala. Nchịkọta ezi uche dị na nke ụzọ atọ ahụ nwere ike imeju ọtụtụ ọrụ njem nlegharị anya. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụfọdụ jaketị ndị na-acha uhie uhie apụtawo. Nke a bụkwa ezigbo nhọrọ, ọ nwekwara njirimara nke okpomọkụ na ifufe. I nwere ike iyi otu ọzọ.
2. Họrọ uwe gị dịka oge na ụzọ
Ofkpụrụ nke uwe akwa atọ bụ ụkpụrụ kachasị mkpa nke egwuregwu egwuregwu n'èzí. Na mgbakwunye, uwe kwesịrị ịgbakwunye na oge dịka ọnọdụ dị n'ezie. Ọ bụrụ na ị ga-ije ije ruo ogologo oge, weta jaket ala. Mgbe ị na-aga ụgbọ mmiri, ị nwere ike ghara ịnwụ oke oyi n'ihi ọsụsọ, mmega ahụ na ahụ ọkụ. N'oge a, eyula jaketị ruo mgbe ị zuru ike n'okporo ụzọ ma ọ bụ maa ụlọikwuu iji dobe okpomọkụ ahụ.
3. Họrọ akwa kwesịrị ekwesị maka afọ dị iche iche
Ndị nọ n’afọ ndụ dị iche na-eji nwayọ nwayị mgbe ha na-apụ. Mgbe ndị agadi na-eme egwuregwu n'èzí, ha ga-eyi ọtụtụ akwa dị ka o kwere mee iji kpoo ọkụ. Uwe akwa nwere akwa nwere ike ichebe okpomoku kariri akwa oyi akwa. Na mgbakwunye, ha nwere ike wepu ọtụtụ akwa akwa mgbe ha na-ekpo ọkụ n'oge mmega ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọghị iyi ọtụtụ akwa, ị nwere ike ịhọrọ ajị anụ tinyekwa jaket egwuregwu abụọ ma ọ bụ jaket a na-ekpuchi windo. Gbalịa ka ị ghara iyi uwe mmiri na jaketị ala n'oge egwuregwu n'èzí, n'ihi na ọsụsọ adịghị mfe nkụ na mmiri ma dị arọ. Jaketị dị ala na-ekpo ọkụ mana ọ naghị eku ume.
Domụaka ekwesịghị iyi akwa akwa ahụ ọkụ n'èzí n'ime ime ụlọ. Uwe ime akwa nke owu zuru oke. Enwere ike iji akwa oyi akwa + akwa ego ma ọ bụ obere jaket padded na-eyi akwa oyi akwa.